Linux 5.2 inogona kunge iri dhiri rakaipa kune mamwe makomputa | Linux Vakapindwa muropa
Munguva dzino, patinotaura nezve chimwe chinhu chine chekuita netekinoroji, tinowanzo taura mwedzi zvisati zvaitika. Parizvino, mazhinji masisitimu anoshanda haasati avandudza kernel yavo kuti ive vhezheni 5.xx uye isu tatova nenhau dzinoenderana Linux 5.2. Sezvo nehuwandu hwemaitiro muFirefox 66, nhau dzatinokuunzira nhasi dzichava dzakanaka kumakomputa mazhinji, asi kune vamwe hazvizove zvakadaro.
Uye ndiyo Linux 5.2 shandisa Live Patching sarudzo yeGCC 9, compiler inofanirwa kuburitswa mumavhiki anotevera. Iyi sarudzo yakasarudzika kubatsira kuburitsa mabhainari anoshanda nemazvo kuti Live Patching ishande. Nekusvika kweLinux kernel v5.2, iyi sarudzo ichazoshandiswa nekukasira, izvo zvinogona kukonzeresa kudonhedza. Izvo hazvifanirwe kunge zvichionekwa, kana kunyatsoita zvakanaka pamakomputa matsva, asi zvinogona kunge zviri dambudziko pane zviwanikwa-zviine zvishandiso zvishandiso.
Linux 5.2 ichaita Live Patching nekutadza
GCC 9 inosuma 5 zvigamba zvingasarudzwa iyo inodzora izvo optimizations zvinoshandiswa kuyedza uye kuona kuti hapana njodzi inoitika kana iyo bhanari ikakwanisa kuisa kernel chengetedzo yekuvandudza pasina kudiwa kwekuitazve. Izvi zvakakosha mune zviitiko senge kGraft, Ksplice uye Kpatch kubatsira kuona kuti iyo GCC compiler haina kugadzirisa rako "live chigamba" basa.
GCC 9.1.0 inosunungurwa gare gare mwedzi uno kana kuti yatove muna Chivabvu. Panguva iyoyo, Linux 5.2 ichaita kuti ishandise marudzi mashanu eLive Patch nekukasira kana ichiitwa pane yakatsigirwa compiler uye kana CONFIG_LIVEPATCH inogoneswa, chimwe chinhu icho zvichave sezvizvi nekutadza mune akawanda Linux kernels. NdiMiroslav Benes, anobva kuSUSE uye munhu anotarisira shanduko, uyo anoyambira izvo mune dzimwe nguva zvisingawanzoitika panogona kuve nekukanganisa kwakashata pakuita semhedzisiro yeiyi "live chigamba" sarudzo inodzora compiler optimization heuristics
Uye ndezvekuti, kunyangwe isu tisingazvifarire, izvi zvinowanzo fanika seizvi: kana tichida kunakidzwa nemabasa matsva, isu tingangodaro tichizorasikirwa nechimwe chinhu, uye izvi zvinonyanya kucherechedzwa mukushandisa kwebhatiri kwema smartphones. Iwe unofungei kuti iyi sarudzo inogoneswa nekusarudzika muLinux 5.2?
Arch Linux 2019.04.1: yayo yekutanga vhezheni neLinux Kernel 5 ikozvino yavapo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux 5.2 inogona kunge iri dhiri rakaipa kune mamwe makomputa
Firefox 68 Husiku uye Firefox Beta 67 inouya neanopokana-neminwe uye kuratidzwa kwemigodhi